Maitiro ekubatanidza Avast muNautilus | Linux Vakapindwa muropa
Kugoverwa kwese kune iyo Nautilus faira maneja, senge Ubuntu, pakati pevamwe, inogona kutevera iyi yakapusa dzidziso kuti ikwanise kubatanidza iyo Avast Antivirus paNautilus uye nekudaro kukwanisa kuishandisa nenzira yakapusa yekuongorora madhairekitori uye mafaera. Kuti muGNU / Linux haudi antivirus kana dziviriro hachisi chokwadi, kunyangwe iri system yakachengeteka, asi zvese zvekudzivirira zvishoma uye iwe unofanirwa kufunga nezvekushandisa nzira dzekudzivirira usati uine izvo.
Asi chinhu chekutanga zviri pachena ndechekuti gadza yazvino vhezheni yeAvast antivirus mune yako distro, kune izvi iwe unofanirwa kuwana iyo Avast webhusaiti uye kurodha pasi pasuru yakakodzera nguva. Iko kune DEB mapakeji, saka kumisikidza kunozove nyore. Kamwe kaiswa, kubva kunyaradzo kana graphic nerubatsiro rwezvimwe zvishandiso zvakaita seGdebi, tinogona kuvhura iyo antivirus uye nekuvandudza siginecha dhatabhesi kubva kuZvekushandisa, Zvaunoda uye muDziviriro tebhu, tinosarudza otomatiki kugadzirisa.
Kuti uwedzere kuNautilus uye nekudaro nekudzvanya kurudyi kuti iyo Avast Scanner sarudzo inoonekwa, isu tinongoenda kuNautilus-Zviito zvinotibvumidza kuwedzera zviito. Iye zvino "Tsanangura chiito chitsva" uye ichatipa hwindo rine akati wandei matabo atinogona kuita. Ive nekuchenjerera, kana iwe usina Nautilus-zviito zvakaiswa, haugone kuzviita, saka chekutanga pane zvese:
In the Chiito tebhu Tinogona kugadzirisa zvinyorwa zvinozoratidzwa, senge "Scan iyi ..." mune "Context label", "Toolbar label" uye "Tooltip" minda kwaunogona kuisa chero chaunoda. Iwe unogona kunyange kusarudza mufananidzo wekuti icon ioneke. Zvino mune iyo yekuraira tebhu, muPath iwe unofanirwa kuisa:
Mune iyo Folders tebhu isu hatibate uye mune Zvimiro isu tichaisa * zvese mu Filenames uye muMimetypes. Iwe unofanirwa zvakare sarudza Match Case uye muAppe kana sarudzo ine iwe unoisa Zvese, wobva wasarudza "akawanda mafaera kana maforodha". Kana iwe uchida, mu Advanced tab unogona kusarudza mhando ye mawedzero ekuitira chiito, zvibvumirano, nezvimwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux software » Maitiro ekubatanidza Avast muNautilus
Antivirus pane Linux? Hapana nzira
Mibvunzo yakati wandei, Isaac.
1. Avast anogara achiongorora hurongwa kumashure, nemhedzisiro yekushandisa zviwanikwa, senge muWindows?
2. Unonyatsoona zvichidikanwa here kuva neyekare antivirus, Windows-dhizaini, muLinux? Clam AV haina kukwana kuti utarise zvemukati pane zvaunoda?
Ini handishandisi Avast, ingori dzidziso kune avo vanoda kuishandisa. Haasi ese software atinotaura nezvayo kana zvidzidzo zvatinoita zvatinoshandisa.
Ini ndinogona kufungidzira kuti haushandise zvirongwa zvese zvaunotaura nezvazvo pablog, uye ini handishandise dzese dzandinobvunza nezvadzo.
Asi hei, mune iyi nyaya mibvunzo yanga yakasiyana.
Asi inoona chero hutachiona hwe linux- chaihwo? nekuti kana ichingoona windows zvaisazobatsira mu linux, zvirinani kana iwe ukangoshandisa linux chete.
Mhoroi vanhu, isu tanga tichishandisa Debian pamakomputa edu pachedu, malaptop nemaseva kweanoda kusvika makore gumi, hatina KUMWE chiitiko nehutachiona, Trojans kana "anyware". Kwete kupenga kwaizoisa antivirus yeGNU / Linux.
Ini ndinoona ipapo avo veLinux vakapindwa muropa vanonyora nezve zvinhu zvavasingashandise. Ipapo ndichishandisa iwoyu mutemo we3 ndichataura pane chimwe chinhu chandisati ndamboshandisa:
Avast yakaenzana neAdware. Kwandiri haina kukurudzirwa kuti uishandise kunyangwe muWindows. Muchiitiko chekushandisa antivirus muWindows ingangove yekupedzisira iwe yaunoshandisa ...
Uye kushandisa Avast paLinux kwakafanana nekutambisa zviwanikwa pakombuta yako.
Ini handina kuyedza iyi vhezheni ye avast mune chero distro, ndinofungidzira kuti ichabatsira zvakanyanya kana ikaona hutachiona hwe windows mumatanho eNTFS, avo vanoita technical service vanongobatanidza diski ne win uye voiongorora, ini handina kuwana iyo upfu neichi, kune dzimwe nzira dzakati wandei mu bootable iso mufananidzo anoita zvakafanana
Vanogona kushandisa clamav iyo yanga iriko kwenguva yakareba neLinux.
Linux Distros yeBhizinesi: Vhura Mamiriro Ebhizinesi